Oromoon diinaan waliin jiraataa jiraachuu isaa ragaan kunooti! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoon diinaan waliin jiraataa jiraachuu isaa ragaan kunooti!
#Warraaqsa Galaana ummataa Baaleetti finiinsamaa jiruu dha.
#Qabsoon itti fufaa
Damee Abbaa Biyyaa
OMN:Oduu Galgalaa Waxabajjii 13,2020
Oromoon diinaan waliin jiraataa jiraachuu isaa ragaan kunooti
Manatu gubanaan Abidda dhaamsaa jiru lol
Mootummaa seera malee abbaa irree jechuun isa kana.Elias Hussein
Dictator Abiy.. jaartiif jaarsa dadhabeef mana jaaraa jechaa harka lafa jalaan hennaa gubsiisu videon ragaa irratti bahee jira.
ABIYIIFII LAMMAAN akka waan OROMOOF Yaadanii gaafa dura OROMOO gorsan, ” dhaabnii oromoo walittii dhufee dhaaba TOKKO qofa ta’uu qaba. ” jechuun paartiillee ETHIOPIA keessa jiran keessaa Kan oromoo qofaan akkas jechaa turan.
Maaliif akkas gochuu yaadan..?
Paartiilleen amhaaraa 30 ol ta’anii seenanii heeyyamas argatanii otuu jiranuu Kan oromoo paartiillee 9 qofa irrattii Kan xiyyeefataniif oromoof yaaddayaniitii miti.
Yaadaaf marii PAARTILLEE SIYAASAA Jiran hunda waliin mari’achuufii fedhii Isaanii qofa irratti murteen hundi akka murtaayuuf qofa itti Yaadanii Kan godhaniidha.
Akkamittii…? Paartiin biyya bulchaa jira jedhu hojiif kaayyoon isaa hundi Kan oromoo qofa dhiibee, oromiyaa qofa miidhu ta’ee, kaayyoof fedha paartiillee HABASHOOTAA hundaa gammachiisu waan ta’eef, paartilee biroo irraa deeggarsa malee mormiin tokkoolleen Kan isaan hin mudanne dha.
Kanaaf marii PAARTILLEE jedhu keessatti paartiin oromoo TOKKO yookin LAMA qofa waan ta’eef maricha keessatti yaada isaan kaasan mormuuf harkii lakkoofsaaf dhihaatu TOKKO yookin LAMA qofa ta’ee, Yaadanii Isaanii qofti yeroo hundaa maricha keessatti moo’ata. Amma Kan ta’e hundi ta’ee darbee jira. Garuu oromoon seeraaf heera biyyatti irratti hundaayuun murtee GUYYAA FILMAATAA ofii dirqisiisaniis ta’u geggeefachuu qaba.
Ambo giddugala qabsoo Oromoo waan taateef isaan shawwaduuf jecha Bilxiginan, Ambo Newyork jettee, sa’aatii kennitee dadhabnaan amma immoo namoota ciccimoo naannoo sanii, keessumattuu weellistoota akka Haacaaluu, Caalaa, Galaanaa, Sayyoo, fi Atilet Fayyisaa fa’a waa itti keennitee akka isaan faarsan taasiftee ummata sobuu barbaaddi. Ambo kan ilmaan isaa wareegee qabsaayeef jara kanaaf makiinaa fi lafa bituuf osoo him taane bilisummaa Oromoo fi Oromiyaati. #Bilxigina Bukkoota 🤷🏽‍♂️
Gochaa suukanneessaan kuni magaalaa Mandii Maatii kiyyarratti kan raawwatame Oromoo waliigalarratti raawwatamaa waan jiru Dha, Abbaa Qabeenyaa Hoteelaa Margaa Taddesaa jedhama.
G/W/B/Aanaa Billoo boshee irra
“Helloo dhamsa kana naaf dabarsi qeerroo Dassaleny Nagash Godina wallagga baha Aanaa waama hagaloo irra gara wallagguma baha aanaa billoo boshe ganda qarree konchi sanyi boqqollo bitachuuf dhufetti milishan ganda qarree konchi shane dhufe jechuun mucaa kana akka malee reebani ilkan sadi keessa cabsani du,eera jechuun mana nama jalatti gototani bira deemani. Garuu mucan qeerroo gandi qarree konchi dirmachuun dhoqqee keessa kaasuun fira itti barbaadun amma firri dhufutti mana yaalatin gahun lubbunsa bararamera
Jarreen gocha sukaneessa rawwatan kun maqan isaani
Takele mana jira
Ababe busha milisha
Damise cawwaqa milisha
Shuma qanno milisha
Taateen sun gaafa 2,10,2012
Galgala naanoo sa, ati 1:00″
ViaGetachew Jigi Demekssa
Biyya Ameerikaatti poolisiin garaa-jabinnaan nama gurraacha Joorj Flooyid jedhamu qaacirarra ejjattee ukkaamsuudhaan yemmuu ajjaasu kan viidiyoo waraabdee Facebook irratti maxxansite intala umrii 17 kan taate Darneellaa Fireezer jedhamti. Wanti ishiin goote kun addunyaa mararratti fincila walqixxummaa ilmaan namaatiif godhamaaru dhooseera. Barattuu mana barnoota sadarkaa lammaffaa taate tanattis kabaja haalaan seena qabeessa ta’e itti horeera.
Isin hundi keessanis Darneellaa Fireezer irraa waa baradhaa. Sarbamuu mirga dhala namaa argitan kamuu karaa dandeettan kamiinuu (video, audio, documents) ragaaf akka ta’u waraabaatii addunyaaf saaxilaa.
Darneellaa Fireezerif kabaja jabaatu malaafi.
Odeeffannoon achuma Bilxiginnaa keessaa argachaa jirra. Warri obsa fixate kan achi keessa jiru hedduudha. Kanarraa diigamaa jiraachuu isaanii ammallee hin hubatan. Qabatamaan osoo suuraa itti agarsiisaa maqaa waliin itti himnu dunuunfatanii diraamaa jedhu. Dubbiin achi hin jirtu. Waa heddu harkaa qabna. Garii nageenya warra odeeffannoo nutti erguuf jennee hin baafne. Hunduu tartiiba eeggatee baha. Salphina keessan masaraa MM irraa hanga gandaatti walitti isinii qabaa jirra.
Ethiopia: የደቡብ መተርተር በተመስገን ደሳለኝ | Temesgen Desalegn????
ሰበር ዜና : ከእዚህ በፊት ዶ/ር ሚልኬሳ ሚdheጋ አስመልክቶ ከPP/ብልጥግና ጋር በነበራቸው አለመግባባት ከሥልጣናቸው ለግዜው በሚል ሰበብ መነሳታቸው ይታወቃል።